Wararka - Sannadka waalan ee warshadaha aan dunta lahayn
Sannadka waalan ee warshadaha aan dunta lahayn ee caalamiga ah
Sababtoo ah saameynta cudurka faafa ee cusub ee 2020, warshadaha badankood waxay la kulmeen in muddo ah maqnaansho, howlihii kala duwan ee dhaqaalaha ayaa si ku meel gaar ah u istaagay. Xaaladdan oo kale, warshadaha dharka aan tolnayn ayaa ka mashquulsan sidii hore. Sida baahida loo qabo wax soo saarka sidamasaxa jeermiskaiyo maaskaro ayaa gaadhay heerar aan horay loo arag sanadkan, warbixinnada wararka ee ku saabsan kor u kaca baahida loo qabo alaabada substrate (waxyaabaha dhalaalaya dhalaalaya) ayaa noqday kuwa guud, dad badanna waxay maqleen eray cusub markii ugu horeysay-maya maro Spun, dadku waxay bilaabeen inay bixiyaan wax badan fiiro gaar ah u leh doorka muhiimka ah ee walxaha aan tolmo lahayn leh ee ilaalinta caafimaadka bulshada. 2020 waxaa laga yaabaa inay sanad lumiso warshadaha kale, laakiin xaaladdan ma khusayso warshadaha aan tolnayn.
Jawaab celinta Covid-19, shirkaduhu waxay kordhiyaan wax soosaarka ama waxay ballaariyaan baaxadda ganacsigooda suuqyada cusub
Waxay ka badan tahay sannad tan iyo markii ugu horreysay ee la soo sheego kiisaska Covid-19. Maaddaama fayrasku si tartiib tartiib ah ugu faafayo Aasiya una sii gudbayo Yurub iyo ugu dambayntii Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika bilaha ugu horreeya sannadka 2020, warshado badan ayaa la soo gudboonaaday ganaax ama xidhitaan. Warshadaha dharka aan tolnayn ayaa bilaabay inay si dhakhso leh u horumariyaan. Suuqyo badan oo loogu talagalay adeegyo aan kala sooc lahayn (caafimaad, daryeel caafimaad, fayadhowr, tirtiro, iwm.) Ayaa lagu dhawaaqay ganacsiyo muhiim ah muddo dheer, waxaana jira baahi sare oo aan horay loo arag oo loo qabo qalabka caafimaadka sida dharka ilaalinta, waji shareerka, iyo neefsadayaasha. Waxay sidoo kale ka dhigan tahay in shirkado badan oo ka tirsan warshadaha ay dhab ahaantii kordhiyaan wax soo saarka ama ay u ballaariyaan ganacsiyadooda hadda jira suuqyo cusub. Sida laga soo xigtay Jacob Holm, oo ah soo saaraha Sontara dharka, maadaama baahida loo qabo qalab ilaalin shakhsiyadeed (PPE) ay korodhay bishii Maajo, soo saarista qalabkan ayaa kordhay 65%. Jacob Holm wuxuu si weyn kor ugu qaaday wax soo saarka isaga oo tirtiray cilladaha khadadka qaar ee jira iyo horumarada kale, wuxuuna si dhakhso leh u shaaciyay in la dhisi doono warshad cusub oo balaadhinta adduunka ah, taas oo la bilaabi doono horaanta sanadka soo socda. DuPont (DuPont) ayaa sanado badan siinayay Tyvek nonwovens suuqa caafimaadka. Maaddaama coronavirus-ka uu wado baahida loo qabo qalabka caafimaadka, DuPont ayaa qalabka loo isticmaalo suuqa dhismaha iyo codsiyada kale u wareejin doonta suuqa caafimaadka. Isla mar ahaantaana, waxay ku dhawaaqday inay noqon doonto Virginia. Gobolku wuxuu kordhiyay awooda wax soo saar si ay si dhakhso leh u soo saaraan alaabooyin badan oo ilaaliya caafimaadka. Marka lagu daro warshadaha aan duubnayn, shirkadaha kale ee aan dhaqan ahaan ku lug lahayn caafimaadka iyo suuqyada PPR ayaa sidoo kale qaaday talaabooyin deg deg ah si ay ula kulmaan baahida sii kordheysa ee uu sababay fayraska cusub ee taajku. Dhismaha iyo soo saaraha alaabada gaarka ah Johns Manville ayaa sidoo kale u isticmaali doona qalabka meltblown ee lagu soo saaray Michigan oo loogu talagalay wajiga wajiga iyo codsiyada maaskarada, iyo spunbond nonwovens ee codsiyada caafimaadka ee South Carolina.
Warshadaha-hogaaminaya soosaarayaasha dharka nonwoven in la kordhiyo awoodda wax soo saarka meltblown sanadkan
Sanadka 2020, ku dhowaad 40 khadadka wax soo saarka meltblown cusub ayaa la qorsheynayaa in lagu daro Waqooyiga Ameerika oo keliya, iyo 100 khadadka wax soo saarka cusub ayaa lagu dari karaa adduunka. Bilowgii dillaaca, shirkadda mashiinka meltblown Reifenhauser waxay ku dhawaaqday inay soo gaabin karto waqtiga dhalmada ee khadka meltblown ilaa 3.5 bilood, sidaas awgeed waxay si deg deg ah oo lagu kalsoonaan karo u heli kartaa gabaabsi la'aanta adduunka. Berry Group marwalba waxay safka hore kaga jirtay fidinta awooda meltblown. Markii la ogaaday khatarta fayraska taajka cusub, Berry wuxuu dhab ahaantii qaaday tallaabooyin lagu kordhinayo awoodda dhalaalka. Waqtigan xaadirka ah, Berry wuxuu soo saaray khadad wax soo saar oo cusub oo ku yaal Brazil, Mareykanka, Shiinaha, Boqortooyada Ingiriiska iyo Yurub. , Oo aakhirka ka shaqeyn doonta sagaal xariiq oo wax soo saar ah oo adduunka oo dhan ah. Sida Berry oo kale, inta badan soosaarayaasha dharka waaweyn ee dunta soo saara ayaa kordhiyay awooddooda wax soo saar meltblown sanadkan. Lydall wuxuu ku darayaa laba khad oo wax soo saar ah Rochester, New Hampshire, iyo hal khad soosaar France. Fitesa waxay dejineysaa khadadka wax soo saarka meltblown cusub ee Talyaaniga, Jarmalka iyo South Carolina; Sandler wuxuu maalgashanayaa Jarmalka; Mogul waxay ku kordhisay laba xariiq oo wax soo saar meltblown ah dalka Turkiga; Freudenberg wuxuu ku daray khad wax soo saar gudaha Jarmalka. Isla mar ahaantaana, qaar ka mid ah shirkadaha ku cusub goobta nonwovens ayaa sidoo kale maal galiyay khadadka wax soo saarka cusub. Shirkadahaani waxay u dhexeeyaan alaab-qeybiyeyaal waaweyn oo alaab-qeybiyeyaal badan iyo kuwa yar-yar oo madax-bannaan, laakiin ujeedadooda guud waxay tahay inay ka caawiyaan buuxinta baahida caalamiga ah ee maaddada maaskarada.
Wax soosaarayaasha waxsoosaarka fayadhowrka jirka waxay ballaariyaan baaxadda ganacsigooda si ay u qariyaan wax soo saarka
Si loo hubiyo inay jirto awood wax soo saar oo aan tolmo lahayn oo daboolan baahida suuqa maaskarada, shirkadaha suuqyada kala duwan ee macaamiisha ayaa bilaabay inay kordhiyaan wax soo saarka maaskaro. Sababtoo ah iskumid ahaanta udhaxeysa soo saarista waji-shareerka iyo alaabada fayodhowrka ee nuugaya, soosaarayaasha xafaayadaha iyo alaabada fayodhowrka dumarka ayaa safka hore kaga jira waji gashadan. Bishii Abriil ee sannadkan, P&G waxay ku dhawaaqday inay beddeli doonto awoodda wax soo saar oo ay bilaabi doonto waji-soo-saarista ku dhowaad toban saldhig oo wax soo saar adduunka ah. Maamulaha shirkadda Procter & Gamble David Taylor ayaa sheegay in soosaarka maaskarada uu ka bilaabmay Shiinaha isla markaana uu hadda ku sii fidayo Waqooyiga Ameerika, Yurub, Aasiya Baasifigga, Bariga Dhexe iyo Afrika. Marka lagu daro Procter & Gamble, shirkadda 'Essity' ee Sweden ayaa shaacisay qorshayaal ay ku soo saarayso waji loogu talagalay suuqa Sweden. Khabiirka caafimaadka Koonfurta Ameerika CMPC wuxuu ku dhawaaqay inuu awood u yeelan doono inuu soo saaro 18.5 milyan oo waji ah bishiiba mustaqbalka dhow. CMPC waxay ku dartay shan khadadka wax soo saarka maaskaro afar dal (Chile, Brazil, Peru iyo Mexico). Waddan / gobol kasta, waji-daboolan ayaa loo siin doonaa adeegyada caafimaadka bulshada oo lacag la’aan ah. Bishii Sebtembar, Ontex wuxuu bilaabay khad soo saar leh oo leh awood wax soo saar sanadle ah oo ku dhow 80 milyan oo waji ah warshadeeda Eeklo ee Belgium. Laga soo bilaabo Ogosto, khadka wax soo saarka wuxuu soo saaray 100,000 oo waji maalin kasta.
Mugga soosaarka ee tirtiraha qoyan ayaa kordhay, iyo la kulanka baahida suuqa ee tirtirka qoyan ayaa wali wajahaya caqabado
Sannadkan, iyada oo ay sii kordhayso baahida loo qabo in jeermiska lagu nadiifiyo oo si joogto ah loo soo bandhigo codsiyada tirtiraha cusub ee warshadaha, daryeelka shaqsiyeed iyo guriga, maalgashiga aaggan ayaa xoog badnaa. Sannadkii 2020, laba ka mid ah dunnida hormoodka ka ah soosaarayaasha dharka aan kala soocin, Rockline Industries iyo Nice-Pak, ayaa labaduba ku dhawaaqay inay si weyn u ballaarin doonaan howlahooda Waqooyiga Ameerika. Bishii Ogosto, Rockline waxay sheegtay inay dhisi doonto khad cusub oo jeermiska wax lagu nadiifiyo ah oo ay ku kacayso US $ 20 milyan Wisconsin. Sida ay wararku sheegayaan maalgashigan ayaa ku dhowaad laba jibaaridoona wax soo saarka shirkadda. Khadka cusub ee wax soo saarka, oo loo yaqaan 'XC-105 Galaxy', wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah khadadka ugu weyn ee wax soo saarka jeermiska qoyan ee warshadaha tirtiraha astaanta gaarka ah. Waxaa la filayaa in la dhammaystiro bartamaha 2021. Sidoo kale, shirkadda soo saarta masaxa qoyan ee Nice-Pak ayaa ku dhawaaqday qorshe lagu laba jibaarayo awoodda wax soo saar ee mashiinnada jeermiska lagu dilo ee warshadeeda Jonesboro. Nice-Pak waxay bedeshay qorshihii wax soosaarka warshada oo ay ka dhigtay 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii qorshaha wax soo saarka, iyadoo markaa la sii ballaadhinayo wax soo saarka. In kasta oo shirkado badani ay si weyn u kordhiyeen awoodda wax soo saar ee tirtirka qoyan, haddana waxay weli wajahayaan caqabado la kulmaya baahida suuqa ee masaxaadda jeermiska. Bishii Nofeembar, Clorox waxay ku dhawaaqday kororka wax soo saarka iyo iskaashiga alaab-qeybiyeyaasha saddexaad. In kasta oo ku dhowaad hal milyan oo baakado oo ah masaxada Clorox loo diro dukaamada maalin kasta, haddana weli ma dabooli karto baahida.
Kala qaybinta silsiladda sahayda ee warshadaha caafimaadka ayaa noqotay isbeddel muuqda
Sannadihii ugu dambeeyay, isdhexgalka silsiladda wax soo saarka ee warshadaha caafimaadka ayaa sii socday. Isbeddelkani wuxuu bilaabmay markii Berry Plastics ay heleen Avintiv oo ay ku milmeen nonwovens iyo filim, kuwaas oo ah labada qaybood ee aasaasiga ah ee alaabada fayadhowrka. Markii Berry uu helay Clopay, oo ah soo saaraha tiknoolajiyada filimka neefsashada ee 2018, xitaa wuxuu balaariyay codsigiisa goobta filimka. Sannadkan, shirkad kale oo soosaara dharka oo aan labisneyn Fitesa ayaa sidoo kale ballaarisay ganacsigeeda filim iyada oo loo marayo helitaanka ganacsiga Filimada Daryeelka Shakhsi ahaaneed ee Tredegar, oo ay ku jiraan saldhig wax soo saar oo ku yaal Terre Haute, Indiana, Kerkrade, Netherlands, Rétság, Hungary, Diadema, Brazil, iyo Pune, Hindiya. La wareegistu waxay xoojineysaa filimka Fitesa, alaabada laastikada ah iyo ganacsiga duugga ah.